Vetikal Blinds Fabric Manufacturers & Suppliers - China Vetikal Blinds Fabric Factory
China Factory Tụkwasịnụ Vetikal Blinds Fabric Na Mpi Ahịa
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-ejigharị eriri ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'elu ụgbọ okporo ígwè, ma nwee ike belata kpamkpam aka ekpe na aka nri iji nweta nzube nke shading. Mara mma, mara mma ma na-enwu gbaa. Ọ dị mma ma dị nkenke. Igwe nkpuchi ihu igwe nwere ikike na-agbakwunye usoro ihe eji eme ihe, na akwa akwa nwere ike gbanwee 180 ogo. Enwere ike iji moto ahụ mee ihe iji nweta nkụja na nkwụsị nke ndị kpuru ìsì site na usoro nnyefe igwe. O nwere ike idozi ọkụ ime ụlọ mgbe ọ bụla ọ chọrọ, ventilet ma mezuo nzube nke shading.
100% Polyester siri ike na-ekpuchi ihu na-acha uhie uhie na-acha odo odo
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-ejigharị eriri ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'elu ụgbọ okporo ígwè, ma nwee ike belata kpamkpam aka ekpe na aka nri iji nweta nzube nke shading. Mara mma, mara mma ma na-enwu gbaa. Ọ dị mma ma dị nkenke, ákwà mkpuchi na-ekpuchi ihu nwere ọrụ nke mkpuchi mkpuchi, ikpo ọkụ, ihe akaebe mmiri na nchebe ultraviolet. Ọ dị mfe ihicha ma ghara ịjụ oyi. A na-edozi gburugburu ebe obibi. Mgbe a na-emechi ákwà kpuchiri ihu na-emechi ka anwụ ghara ịcha, enwere ike gbanwee akụkụ ya iji nwee ọ enjoyụ ebe dị n'èzí, nke jikọtara ịma mma na ịba uru. E nwere ọtụtụ ụdị maka ndị ahịa ịhọrọ, ọ dabara maka ebe ọha na eze dịka ụlọ nzukọ, ọnụ ụlọ VIP, ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, wdg.
High Quality Vertical Blinds Fabric 100% Polyester N'ihi Smart Home
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-akwụkwụ ụgwọ ihu ya n'ọdụ ụgbọ elu. Igwe nkpuchi ihu igwe nwere ikike na-agbakwunye usoro ihe eji eme ihe, na akwa akwa nwere ike gbanwee 180 ogo. Enwere ike iji moto ahụ mee ihe iji nweta nkụja na nkwụsị nke ndị kpuru ìsì site na usoro nnyefe igwe. O nwere ike idozi ọkụ ime ụlọ mgbe ọ bụla ọ chọrọ, ventilet ma mezuo nzube nke shading. Oghere eletriki eletrik na-ejikọta ịdị irè, mmetụta nke oge na mmetụta nka na otu, n'ihi ịhụnanya ya, ịdị mma ya na mmesapụ aka ya, ọ bụrụla nhọrọ mbụ maka ụlọ ọrụ ọfịs, ụlọ ọrụ gọọmentị na ebe ọha na eze.
Multi-acha Vertical Fabric 100% Polyester With 89mm Obosara
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-ejigharị eriri ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'elu ụgbọ okporo ígwè, ma nwee ike belata kpamkpam aka ekpe na aka nri iji nweta nzube nke shading. Enwere ike imezi na nhicha nke ákwà mkpuchi ihu na ụzọ ndị a: Pdacha ìsì ugboro ugboro nwere ike belata nchịkọta nke ájá na ọnụ ọgụgụ. Na nlekọta nkịtị nke ákwà mgbochi kwụ ọtọ, ịnwere ike iji ahịhịa na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ ájá ájá iji wepụ ájá. Na mgbakwunye, ịnwekwara ike iji ihe nhicha ọkụ na-ehicha, mmetụta ga-aka mma.
New Style Vertical Blinds Fabric 100% Polyester With 127mm Obosara
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-ejigharị eriri ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'elu ụgbọ okporo ígwè, ma nwee ike belata kpamkpam aka ekpe na aka nri iji nweta nzube nke shading. Ọdịdị nke ákwà mkpuchi ihu ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ojiji a ga-eji eme ya n'ọdịnihu, yabụ mgbe ị na-azụ ákwà mgbochi kwụ ọtọ, anyị ga-elebara anya na akwa nke akwa mkpuchi ihu. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịzụrụ akwa mkpuchi ihu:
1.Ọ bụrụ na ngwaahịa a na-azụ ahịa nke kwụ ọtọ na-ewepụta isi ísì, ọ pụtara na enwere ihe fọdụrụ na formaldehyde na ákwà mgbochi a na-adịghị atụ aro ịzụta;
2.Mgbe ịhọrọ agba nke ákwà mgbochi kwụ ọtọ, a na-atụ aro ka ị jiri ákwà mgbochi na-acha ọkụ ọkụ maka iji ya mee ihe ogologo oge na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ìhè-vetikal na-acha ọcha nwere ike ịnwe oke formaldehyde na agba ọsọ ọsọ karịa ka ákwà mgbochi vetikal nwere agba gbara ọchịchịrị.
Nkwado Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo 100% Polyester Semi-Blackout
1. Agba nke vetikal vetikal kwesịrị ijikọta ya na agba nke ime ụlọ ahụ dum. Ọ bụrụ na arịa ụlọ gbara ọchịchịrị n'ụdị, mgbe ahụ ákwà mgbochi kwụ ọtọ kwesịrị iji ụfọdụ ngwaahịa agba agba, ma ọ bụghị na agba ọchịchịrị ga-eme ka ndị mmadụ nwee nkụda mmụọ.
Thedị ejiji na-ekpuchi ihu na-adị mfe, dabara adaba maka ụdị ọchọmma ọgbara ọhụrụ, nke dị mfe ma ọ bụ nke America. Ọ dabara adaba maka ntinye ohere na windo ndị dị n'elu ala.
Mfe na Mara Vetikal Blinds Fabric ọkara ọkara maka Office
A na-akpọ ákwà na-ekpuchi ihu ọtọ n'ihi na a na-ejigharị eriri ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'elu ụgbọ okporo ígwè, ma nwee ike belata kpamkpam aka ekpe na aka nri iji nweta nzube nke shading. Mara mma, mara mma ma na-enwu gbaa. Ọ dị mma ma dị nkenke, ákwà mkpuchi na-ekpuchi ihu nwere ọrụ nke mkpuchi mkpuchi, ikpo ọkụ, ihe akaebe mmiri na nchebe ultraviolet. N’ọnwa isii ọ bụla, ekwesịrị ịkwatu ákwà mkpuchi ihu ọtọ dị larịị maka ihicha na ndozi. Na nhicha, ejila ịcha ọcha, akpịrị ịkpọ nkụ na ihicha. Ka vetikal na-ekpuchi ihu ha na-akpọnwụ n'ụzọ nkịtị, ma ọ bụghị ya, a ga-emebi ụdị nke ákwà mkpuchi ihu.